သင်ယူမှုအတတ်ပညာ(စာဖတ်နည်း scanning နှင့် skimming) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on January 3, 2012 at 11:31 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်မှုအပေါင်း၊ အောင်မြင်မှုအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ ညီငယ်ညီမငယ်တို့အတွက် နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်အဖြစ် စာဖတ်နည်းစနစ်နှစ်မျိုးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ကျောင်းသားဘ၀တစ်လျောက်လုံးမှာ စာတွေအများကြီးဖတ်ခဲ့ရတယ်။ နောင်လည်းဖတ်ရဦးမယ်။
စာမေးပွဲတွေအများကြီးဖြေခဲ့ရတယ်။ နောင်လည်းဖြေနေရဦးမယ်။ ဒီတော့ ကျောင်းသားများမသိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့စာဖတ်စွမ်းရည်များထဲက အရေးအကြီးဆုံး scanning နဲ့ skimming ဆိုတာကိုရေးချင်ပါတယ်။
သိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအသုံးချတယ်၊ ဘာကြောင့်အသုံးချတယ်ဆိုတာကိုသာ တွဲမသိကြတာပါ။ scanning နဲ့ skimming ဟာ စာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ သတင်းစာ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာ စသည်တို့ကိုဖတ်ရာမှာ
စာဖတ်နည်းနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်မျိုးစလုံးအမြန်ဖတ်တာဖြစ်ပေမယ့် ဖတ်ပုံဖတ်နည်းကွာပါတယ်။
စာမေးပွဲဖြေရာမှာအလွန်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ရာထူးဝင်စာမေးပွဲတွေ၊တက္ကသိုလ်အရည်အချင်း စစ်စာမေးပွဲတွေ၊ IELTS, TOEFL လိုစာမေးပွဲဖြေမယ့်သူများအတွက်တော့ဒီစွမ်းရည်နှစ်ခုဟာသေရေးရှင်ရေး အရးတကြီးလိုအပ်လှပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာစာမေးပွဲတိုင်းမှာ reading comprehension ပါလေ့ရှိပါတယ်။ မေးခွန်းပုံစံကတော့ True/False ရွေးတာ၊ Matching လုပ်တာ၊ မေးခွန်းကို short
answer, complete answer ဖြေရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကလေးကိုယ့်ဘာသာကိုမေးကြည့်ပါ။ readingcomprehension ဖြေတဲ့အခါမှာသင်ဟာစာပိုဒ်ကိုအရင်ဖတ်သူလား၊ မေးခွန်းတွေကိုအရင်ဖတ်သူလားလို့။
စာပိုဒ်ကိုအရင်ဖတ်သူဆိုရင်တော့ သင်ဟာဒီအလေ့အထလေးကိုပြင်ဖို့သင့်ပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
Skimming ဆိုတာ စာတစ်ပိုဒ်၊ တစ်မျက်နှာ၊ (သို့) ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို အမြန်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ တစ်ခုလုံးရဲ့ topic ယေဘုယျအကြောင်းအရာ ၊ main idea အဓိကဆိုလိုရင်း (သို့) ပဓာနအာဘော်ကိုရှာကြည့်ခြင်းပါပဲ။ Skim
မနက်အိပ်ယာထလို့ကော်ဖီသောက်ရင်း သတင်းစာကောက်ကိုင်လိုက်မယ်။ (ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ သတင်းစာက နေ့လည် တစ်နာရီလောက်မှရောက်တယ်) ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းထူးတွေဘာတွေရှိနေလဲသိချင်တယ်။ ဒါဆို skim လုပ်ရမှာပေါ့။ သတင်းခေါင်းစဉ် (headlines) တွေလိုက်ဖတ်မယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းဆိုရင်ခပ်သွက်သွက်ကလေးဖတ်မယ်။ ပုံတွေကြည့်မယ်။ပုံအောက်ကစာဖတ်မယ်။ စာတစ်မျက်နှာပြီးတစ်မျက်နှာလှန်ကြည့်သွားမယ်။
စာအုပ်ဆိုင်မှာကိုယ့်အကြိုက်ဝတ္ထုစာအုပ်တစ်အုပ်ဝယ်ချင်တယ်။ ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။ဒါဆိုရင်လည်း skim လုပ်ရမှာပဲပေါ့။ စာရေးဆရာနာမည်ကြည့်မယ်။ စာအုပ်ခေါင်းစဉ်ကြည့်တာနဲ့ ဘာအကြောင်း အရာလဲ၊ အချစ်လား၊ အလွမ်းလား၊ သဲထိတ်ရင်ဖိုစွန့်စားခန်းလားသိနိုင်မယ်။ အရေးအသား သိချင်ရင် စာအုပ် ရှေ့ပိုင်းလေးနည်းနည်းဖတ်ကြည့်မယ်။ ကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးဘယ်လိုတွေ့ကြလဲဖတ်ကြည့်မယ်။ ဇာတ်ရှိန်ဘယ်လိုမြင့်လာလဲ။အလယ်ပိုင်းနည်းနည်းဖတ်ကြည့်မယ်။ဘယ်လိုဇတ်သိမ်းသွားလဲ။ နောက်ဆုံးစာမျက်နှာလေးဖတ်ကြည့်မယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အဖြေရပြီပေါ့။ ဒါတွေဟာ နေ့စဉ်ဘ၀ထဲမှာskimလုပ်ပြီးစာဖတ်ရတဲ့ဥပမာတွေ ပဲပေါ့။ ကျောင်းသားတွေအတွက် ဆိုရင်လည်း အများကြီးပါ။ မေးခွန်းကိုကြည့်ပြီး skim လား scan လား ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
* ဓါတ်ပုံ၊ ဇယား၊ သရုပ်ပြပုံ၊ ဂရပ်တွေကြည့်ပါ။
ဒါတွေဟာ skim လုပ်ရာမှာသုံးနိုင်တဲ့နည်းစနစ်ဘောင်လေးတစ်ခုပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်နည်းတွေလည်းစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖတ်တဲ့အခါမှာ မျက်လုံးက စာကြောင်းရဲ့ ဘယ်ကနေညာကိုအမြန်ရွှေ့သွားပြီးဖတ်ပါတယ်။ မသိတဲ့စကားလုံးချန်ထားခဲ့ပါ။ function words တွေဖြစ်တဲ့ preposition, pronouns, conjunction, particles စတာတွေကိုမလိုအပ်ရင်ကျော်ဖတ်သွားပါ။ တစ်ချို့ကျတော့ လက်ညှိုးသို့မဟုတ် ဘောပင်ကိုစာရွက်ပေါ်မှာ ဘယ်ညာပြေးပြီးအဲဒီနောက်ကိုမျက်လုံးကလိုက်ဖတ်တတ်ပါတယ်။
လုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိနေရပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကိုဖြေနိုင်ဖို့စာပိုဒ်ထဲမှာလိုက်ရှာရပါတယ်။
မေးခွန်းရဲ့အဖြေမဟုတ်တဲ့၊ မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ရပါတယ်။ skimming ယျေဘုယကိုရှာတယ်ဆိုရင် သူက အတိအကျကိုရှာပါတယ်။ scanning ဟာ ဖတ်တယ်ဆိုတာထက် ရှာတယ်လို့ဆိုရင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။
ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရဲ့ဖုံးနံပါတ်လိုချင်တယ်ဆိုပါစို့။ Yangon Directory သို့မဟုတ် YllowPages တစ်အုပ် ကောက်ကိုင်လိုက်မယ်။ ဟိုတယ်ဆိုတော့ H နဲ့စတဲ့စာမျက်နှာကိုတန်းဖွင့်လိုက်မယ်။ Ha ကနေHiနဲ့စတာတွေကိုယ်မလိုဘူး။ Hotelဆိုတာတွေရင် Se နဲ့စတာကိုခုန်ကျော်ကြည့် မယ်။ တွေ့ရင်ခေါင်းစဉ်တွေ၊ ကြော်ညာစာသားတွေ၊ သူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းရေးထား တာတွေကြည့်ဖို့မလိုဘူး။ ဆက်သွယ်ရန် ဆိုတဲ့နားကဂဏန်းဟာ ကိုယ့်မေးခွန်းရဲ့အဖြေဆိုတာသိလိုက်ပြီ။
* အဖြေဟာဘယ်နေရာလောက်မှာ ရှိနိုင်သလဲ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှိနိုင်လဲဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်ပါ။ ဥပမာ
* ကိုယ်ရှာချင်တဲ့အချက်အလက် ရှိနေနိုင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ခွဲတွေ၊ရှာဖွေရာမှာတခြားအထောက်အကူပြုမယ့်
scan လုပ်ရာမှာ skim လုပ်သလိုမျိုးပဲ လက်ညှိုးသို့မဟုတ် ဘောပင်သုံးကာ ဘယ်ညာ၊ ထက်အောက် ဖြစ်စေဒေါင့်ဖြတ်ဖြစ်စေ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့လည်းဒါကိုသဘောမကျဘူး။ ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်မှာတုန်းက အတန်းထဲကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဒီလိုမျိုး ဘောပင်လေးထောက်ပြီးဖတ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါကို ဆရာမတစ်ယောက်က irritating reading habit လို့ဝေဖန်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ကျောင်းကပြန်အရောက်မှာပဲ ကျွန်တော် အင်တာနက်မှာ speed reading, reading teachniques စတာတွေကိုရှာဖတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖတ်လိုက်မှပဲ အဲဒီဆရာမပြောတာ ၁၀၀ % မမှန်ဘူးဆိုတာနားလည်လိုက်ပါတယ်။ skimming aid အဖြစ် လက်ညှိုးသို့မဟုတ် ဘောပင်သုံးတာထောက်ခံတဲ့ဆောင်းပါးတွေအများကြီးပါ။ မထောက်ခံတဲ့ဆောင်းပါးတွေလည်းရှိပါတယ်။
ချို့ယွင်းချက်တွေအများကြီးရှိမှာပါ။ စာဖတ်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော့်စာထဲကအချက်အလက်တစ်ချို့ကို ဖတ်ပြီးဆက်လက်စမ်းစစ်ကြည့်ချင်စိတ်၊ လေ့လာချင်စိတ်ပေါ်လာရင်ရေးရကျိုးနပ်ပြီလို့ယူဆပါတယ်။
Permalink Reply by Su Kay Khaing on January 3, 2012 at 16:03
Permalink Reply by Rebecca on January 3, 2012 at 16:19
ဖတ်ရတာ သိပ်ပြီး အကျိုး၇ှိပါတယ်
Permalink Reply by Aung Thu on January 3, 2012 at 16:42
I like your post because you can explain to understand with simple example.
Permalink Reply by M38 on January 3, 2012 at 17:35
Permalink Reply by ohnmar on January 3, 2012 at 17:46
Permalink Reply by komintheintun on January 3, 2012 at 17:50
Permalink Reply by minnyanthar on January 3, 2012 at 20:09
Permalink Reply by 1qt4uqpjz12i3 on January 3, 2012 at 20:46
Permalink Reply by Wathan Moe on January 3, 2012 at 21:43
It is very good.Many thank for your post.
Permalink Reply by 1z3uv9wv4g06w on January 3, 2012 at 21:48
Permalink Reply by upokun on January 3, 2012 at 22:55
Permalink Reply by Thu Rein Maung Maung on January 3, 2012 at 23:28
BRAVO Saya Zarni! Thanks, really appreciate it.